Ndị na-eme njem nlegharị anya n'Africa katọrọ Mmebi Iwu South Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị na-eme njem nlegharị anya n'Africa katọrọ Mmebi Iwu South Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Cuthbert Ncube bụ onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Africa
Ọnọdụ dị ugbu a na Republic of South Africa na -emetụta. Ime ihe ike kacha njọ n'ime afọ malitere mgbe a tụrụ onye bụbu onye isi oche RSA Zuma mkpọrọ.
Iwe na ịha nhatanha nke ịkpa oke agbụrụ na-ebute ọgbaghara. Ndị bi na -ahazi ichebe ihe, na -ebuso ndị na -apụnara mmadụ ihe agha
Ndị isi oche South Africa na -atụle mbughari ndị agha ọzọ. Onye isi oche nke ndị njem nlegharị anya nke Africa na -ewepụta nkwupụta.
Cuthbert Ncube, onye isi oche South Africa nke Kọmitii Njem Nleta Africa na -arịọ ka udo dị na esemokwu na ime ihe ike na -aga n'ihu na Republic of South Africa.
Ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ihe iyi egwu njem, njem nlegharị anya na itinye ego n'akụkụ a nke mba a, dịka KZN bụ isi njem nlegharị anya na ebe itinye ego na South Africa, yana etiti maka ihe omume, ọdịbendị na nnọkọ.
Ndị mgbasa ozi na -anwa ịgbasa ọnọdụ ịkwakọrọ ihe n'ime okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mana nke bụ eziokwu bụ na mkpọchi mkpọchi na -emebi mba dara ogbenye. Onye nwe ụlọ ọrụ na -eme njem nlegharị anya na United States na onye otu ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Afrịka kwuru: II ekwuola ihe ọrịa ga -eme obodo ndị dabere na njem. Echeghị m banyere South Africa na ndepụta ahụ. Amaghị m na South Africa dabere na njem nlegharị anya dịka ọ siri mee.
Ajụjụ a na -ajụ na South Africa: Onye bụbu onye isi ala Jacob Zuma nwere ike ọ gaghị abụzi onye isi. Ma enwere onye ọ bụla? Nzaghachi: Ọ dịghị onye ọ bụla na -etinye ihe ọ bụla maka onwe ya.
Onye nnọchi anya njem na Johannesburg kwuru eTurboNews: Anọ m na-agbalị ịmaliteghachi njem ndị njem na South Africa mana ụdị COVID, na ugbu a ọgba aghara…. amaghị mgbe anyị ga -alọta.
Onye isi oche nke Eswatini bụ onye isi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Africa Cuthbert Ncube nọ na Pretoria, South Africa. Ọ gbakwụnyere:
“Ndị njem nlegharị anya nke Afrịka na-akatọ mmebi iwu na ime ihe ike juputara na mpaghara KwaZulu-Natal (KZN) na South Africa wee rute n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ.
Kwụrụ maka South Africa
“Njem nlegharị anya nwere ike bụrụ injin nke mgbake akụ na ụba na itinye ego.
Yabụ, anyị na -arịọ maka udo na njide n'aka ụmụ amaala niile, na ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị
“Ọ ka mma ịmepụta mkparịta ụka ma dozie nchegbu ndị bụ isi.
“Mweghachi nke ikpe COVID na -eso ụdị ọzọ jidere akpa n'Africa enyela ụlọ ọrụ njem njem ọzọ nsogbu.
“Ọgba aghara dị otú ahụ na -enweghị isi agaghị echekwa nkwụsi ike na aha South Africa na kọntinent jikọtara ọnụ.
“Ọ bụ naanị mgbe ndị na -etinye ego, ndị njem, azụmaahịa nwere ntụkwasị obi na sistemụ ka ngalaba ga -amalite ịgbake wee too nke ọma.
Ka anyị niile weghachi mpako nke kọntinent anyị, South Africa, na ógbè ya dị ka ọnụọgụ nhọrọ kachasị maka njem, MICE, itinye ego na ebe ezumike ezinụlọ. "
Ebumnuche nke ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka bụ ka Afrịka bụrụ otu ebe njem nhọrọ n'ụwa. Ndị nnọchi anya ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Africa na -eduzi nzukọ a na kọntinent ahụ niile. Isi ụlọ ọrụ ATB dị na alaeze Eswatini. Ụlọ ọrụ na -ahụ maka ịzụ ahịa njem nlegharị anya nke Africa bụ isi na United States of America. Enwetakwu ozi na mpempe otu www.africantourismboard.com